Filohan’ny SMM : “Azo samborina izay mitsoaka any ivelany” | NewsMada
Filohan’ny SMM : “Azo samborina izay mitsoaka any ivelany”
“Azo samborina tsara ireny olona nitsoaka ireny, raha ohatra any amin’ny firenena manana fifandraisana momba ny fitsarana amin’i Madagasikara izy.” Io ny fanazavan’ny filohan’ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM), i Clément Jaona, momba ireo olona enjehina ara-pitsarana eto an-toerana nefa mitsoaka sy mialokaloka any ivelany.
Ny ankamaroan’izay mitsoaka any ivelany nefa enjehina ara-pitsarana izay, saika mialokaloka any Frantsa avokoa, ohatra. Azo atao amin’ny alalan’ny vaomiera amin’ny fitsarana tompon’andraikitra ny fanenjehana azy. Na ny fampanoavana mangataka ny fampanoavana na ny mpitsara mpanao famotorana any Frantsa misambotra ireny olona ireny ary manao famotorana.
Amin’izany, azo averina aty an-tanindrazana hitohizan’ny fanadihadiana izy. “Afa-mampiasa “Interpol” ny fanjakana hisambotra azy”, hoy izy. Ny filoha tale jeneralin’ny orinasa Nissan sy ny Mitsubishi, ohatra, nitsoaka avy any Japon, fa nosamborin’ny “Interpol”. Narahina hatrany Liban izy.
Misy izany amin’ireo firenena manana fifandraisana amin’i Madagasikara ireo, efa misy fifanarahana ara-pitsarana. Izay fifanarahana ara-pitsarana izay no ahazoana manao ny fanenjehana any amin’ny firenena mifandray amin’i Madagasikara. Anisan’izany, ohatra, i La Réunion, i Frantsa… Amin’ireo firenena tsy ananan’i Madagasikara fifandraisana momba ny fitsarana, toa an’i Etazonia, ohatra: tsy manana fahefana eo an-tanany ny fanjakana hanaovana ny fanenjehana sy ny fisamborana.